I-Epoxy adhesive F104 yephaneli yezinyosi ze-aluminium
● NGESIKHATHI ngaphambi kwe-Epoxy Adhesive F104 isakhi esiyingxenye ezimbili, ekwelashisa okushisa kwekamelo, okuphezulu kokunamathela kokuhlelekile. Kufakelwa ipaneli lenhlanganisela ye-aluminium ehlanganisiwe. Inamandla aphezulu we-bond, amandla e-shear futhi akukho ukwehla kwe-liquid. Awukho iphunga eliyinqayizivele nemiphumela emibi emvelweni nakubasebenzisi.
● Lo mkhiqizo usetshenziselwa ukuhlanganisa nokulengisa itshe elingaphakathi ngaphakathi, njengokuqinisa ngokuqondile nokulengisa i-marble & granite njll odongeni lwangaphakathi noma odongeni lukakhonkolo ngensimbi, nakho kungasetshenziselwa ukubopha izinto ezihlukile njengetshe, insimbi, ukhonkolo, isigaxa sikakhonkolo, izitini zobumba njll.
● Isetshenziselwa ukuzibopha futhi ihlanganyele yensimbi, i-ceramic ne-food board ye-PVC njll. Lapho kudingeka khona umfutho omningi nokuqina kokuqina, njengezitimela, ukwakha umkhumbi, umhlangano wenjini yemoto.
● Futhi lungasetshenziselwa ukubopha izingxenye ezahlukahlukene zokwakheka kwezinto eziyinhlanganisela.
Umshini wokucindezela ukushisa onamandla (iphaneli) （BHM-CH-A100T）
Umshini wokucindezela obandayo obandayo (Iphaneli)